Star City Thanlyin sharedapost.
Hello to our Indian Food Lovers!
Come and taste the Indian food for lunch at Corriander Leaf Restaurant and enjoyeda15% discount. Try now!!!Come and enjoy 😊 Indian food
Alhone FAMILY DINNING
15% discount ( food only)
အထူးအစီအစဉျအနနေဲ့ 15% လြှော့ပေးသှားမှာပါ ... See MoreSee Less
လာမဲ့မတ်လ ၂၂ရက်နေ့မှာ ကလေးများအတွက် ပျော်ရွှင်စရာပွဲလေး ကျင်းပပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အားလုံးကို ချစ်ခင်စွာနဲ့ ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်...
Cordially invite to join our Summer Kids Festival this Friday, March 22, 2019. Please bring your lovely kids to Star City and there are many kids activities and surely they will be fun. Lets rocks!!!
#SaveTheDate #KidsFest #StarCity ... See MoreSee Less
လာခဲ့ကြပါနော်...ကလေးတွေအတွက် ပျော်စရာအစီအစဉ်တွေ အများကြီးပါပါတယ်။ ကာတွန်းဝတ်စုံဝတ်လာတဲ့ ကလေးလေးတွေအတွက်လည်း အမှတ်တရလက်ဆောင် ပေးမယ်နော်
Khine Wai Mon
Star City Thanlyin sharedaphoto.
လှပသန့်ရှင်းတဲ့ အဆင်ပြင်လေးနဲ့ မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်းအပေါင်းပါများနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ အကောင်းဆုံးနေရာများထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Star City သန်လျင်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ နာမည်ကြီးစားသောက်ဆိုင်ခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Gloria Jean's Coffee ကလည်း နွေဦးရာသီအတွက် coffee menu အသစ်ကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီနော်ချော့ကလက်မှ ချော့ကလက်ပဲကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ ချစ်တို့အတွက် ပြီးခဲ့တဲ့လက Valentine’s Day Special အနေနဲ့ Creamy Cocoa Chiller နဲ့ Creamy Hot Cocoa ဆိုတဲ့ Drink လေးနှစ်မျိုးနဲ့ စပြီးမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာ.. သောက်လို့မဝသေးဘူး အခုထိ ခဏခဏထပ်လာသောက်ချင်သေးတယ်ဆိုပြီး တောင်းဆိုနေတာနဲ့ ကိုယ်ကလည်း ချစ်လည်းချစ်တယ် အလိုလည်းလိုက်တတ်တာဆိုတော့ ဒီ Drink နှစ်မျိုးကို အခုချိန်ထိ ဆက်ရှိနေဖို့ စီစဉ်ပေးထားတယ်နော်။ ဒီတော့ ချော့ကလက်ကြိုက်တဲ့ချစ်တို့လည်း Gloria Jean’s မှာ အားရပါးရ ထပ်လာသောက်ကြပါဦးလို့။
Last month, Gloria Jean’s introduced two special drinks, which are Creamy Cocoa Chiller and Creamy Hot Cocoa, as Valentine’s Day Specials for chocolate lovers. But some fans requested that they would like to get those drinks after Valentine’s period also. Yes, we decided to follow your wish. Creamy Cocoa Chiller and Creamy Hot Cocoa will be available till now. So, please come and enjoy your cocoa drinks at Gloria Jean’s.
#GloriaJeansCoffeesMM #CocoaDrinks ... See MoreSee Less
A4 Building, Star City Thanlyin (ကြယ်စင်မြို့တော်အိမ်ရာ)မှာ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ KFC Myanmar ဆိုင်မှာလည်း ကြက်ကြော်စားရင်း သင်္ကြန်လက်ဆောင်လေးတွေ ရယူနိုင်ပြီနော်...လာပြီ လာပြီ သင်္ကြန်အတွက်!
ဒီလို ဒီလို အရမ်းချစ်စရာကောင်းတဲ့ KFC ရဲ့ နီနီရဲရဲရေပုံးလေးနဲ့ဆို
လွှတ်ပြီတော့ကို အထာကျနေမှာပဲနော် 😎
👉 15 March 2019 ကနေစပြီး
👉 KFC Myanmar ရဲ့ ဆိုင်ခွဲအားလုံးမှာ
👉 အနည်းဆုံး ကြက်ကြော်တစ်တုံး 🍗 ၀ယ်ယူရုံနဲ့ ဒီလိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ အတာရေပုံးလေး တစ်ပုံး လက်ဆောင်ပေးသွားမှာပါနော...
*** ကဲ Stock limit လည်းရှိတော့ နီးစပ်ရာဆိုင်ကို မြန်မြန်လေးလာခက်နော် ❤
လာပွီ လာပွီ သင်ျကွနျအတှကျ!
ဒီလို ဒီလို အရမျးခဈြစရာကောငျးတဲ့ KFC ရဲ့ နီနီရဲရဲရပေုံးလေးနဲ့ဆို
လှတျပွီတော့ကို အထာကနြမှောပဲနျော 😎
👉 15 March 2019 ကနစေပွီး
👉 KFC Myanmar ရဲ့ ဆိုငျခှဲအားလုံးမှာ
👉 အနညျးဆုံး ကွကျကွျောတဈတုံး 🍗 ဝယျယူရုံနဲ့ ဒီလိုခဈြစရာကောငျးတဲ့ အတာရပေုံးလေး တဈပုံး လကျဆောငျပေးသှားမှာပါနော...
*** ကဲ Stock limit လညျးရှိတော့ နီးစပျရာဆိုငျကို မွနျမွနျလေးလာခကျနျော ❤
#KFCMyanmar ... See MoreSee Less
Star City ကြယ်စင်မြို့တော်အိမ်ရာ၊ သန်လျင်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Palm Wine Bar & Restaurant ရဲ့ March Special Promotion စတင်နေပြီနော်...
အသေးစိတ်ကိုတော့ အောက်ဖော်ပြပါ ဖုန်းနံပါတ်များကို ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ရှင်...
☎ 09 970270079, 09 5283327
🌴 Wing B, A-4, Star City, Thanlyin, YangonMarch Special Promotion (10% OFF)
Palm Wine Bar ရဲ့ မိတ်ဟောင်း မိတ်သစ် Customer များကို ကျေးဇူးတုံ့ပြန်သော အားဖြင့် မတ်လ2ရက်နေ့မှ 31 ရက်နေ့အထိ မတ်လ တစ်လလုံး Special Promotion ပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါပြီ။ စားသုံးထားသမျှထဲမှ 10% Discount ပေးအပ်မယ့် ယခု Promotion ကို မည်သူမဆို လာရောက် သုံဆောင်နိုင်ပြီး၊ အခြား မည်သည့် ကန့်သတ်ချက်မှ မရှိတာကြောင့် အခုပဲ ဘော်ဒါတွေကို လက်တို့ပြီး သန်လျင် က Palm Wine Bar ကို အပြေးလေး လှမ်းခဲ့လိုက်ပါ ...
*** Palm Wine Bar ကတော့ အမှတ် 290, ဦးဝိစာရလမ်းမှာ တည်ရှိတဲ့ House of Memories Restaurant ရဲ့ ဆိုင်ခွဲတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နော်...
Palm Wine Bar Restaurant
🌴 Wing B, A-4, Star City, Thanlyin, Yangon
☎ 01 525195
🌴 No. 290, U Wisara Road, Yangon
#Special_Promotion ... See MoreSee Less
Star City A5 အဆောက်အဦမှာ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Inya Day Spa ရဲ့ March Weekday Promotion ကိုလည်း Star City ကြယ်စင်အိမ်ရာမှာ နေထိုင်သူများကို ဝမ်းမြောက်စွာဖြင့် အသိပေးအပ်ပါတယ်ရှင့်။
We are delighted to announce that Inya Day Spa March Weekday Promotion is now open to the public! Let's get the reservation!!!
#InyaDaySpa #StarCity #MarchWeekDayPromotion ... See MoreSee Less